FURSAD Shaqo Oo Ka Banaan Diyaarada ITOOBIYA -Airline – KHAATUMO NEWS
FURSAD Shaqo Oo Ka Banaan Diyaarada ITOOBIYA -Airline
•Booska: Duuliye iyo Tababare/Macalin Duuliye.•Goobta/halka laga buuxin karo shaqada: Online.•Waqtiga ay ku egtahay: April 07, 2021.
• Shahaadada/Aqoonta loo baahan yahay:
Electrical/Electronics /Aeronautical /Mechanical /Civil / hydraulic/Industrial/Chemical/Computer / Software / Electronics and Communication/ Hardware /Hydraulic Engineering/Physics / Mathematics /Statistics / Computer Science / Information Science/ Information Technology or any Engineering or IT related-fields with a minimum CGPA of 2.75 from Recognized Ethiopian Higher Institutions ama
• Da’da: ka yar ama la’eg ≤ 25.•
Dhererka: Lab – ugu yaraan 1.70 Mitir.
Dheddig – ugu yaraan 1.65 Mitir.
• Da’da: ka yar ama le’eg ≤ 27
• Dhererka: Lab – ugu yaraan 1.68 Mitir.
Shuruucda la xidhiidhta qarashaadka:
Dhammaan qarashka ku baxaya ardayga waqtiga uu waxbarashada ku jiro waxaa daboolaysa shirkadda.
Ardeygu marka uu dhammaysto waxbarashadiisa ee uu billaabo inuu ka mid noqdo hawl-wadeennada shirkadda ayaa lacagtii deynta aheyd laga jari doonaa mishaarkiisa si bille ah.
• Wixii faah-faahin ee dheeraad ah waxaad kaga bogan doontaa heshiiska idin dhex mari doona shirkadda haddii aad ka gudubto dhammaan shuruudaha.
• Xaqiiji inaad buuxiso dhammaan shuruudaha. Marka aad is diwaan galineyso, Fadlan soo raaci dukumintiga ku saacidaya oo dhan oo SCAN ah oo ay ku jiraan kuwan hoose:
Shahaadada 8aadka ama tan dhalashada. (Waa in uu maamulka magaalada/dowladda hoose kuu sameeyay)~ Shahaadada 10aadka, 12aadka, Degree (BSC ama BA).~ Aqoonsi qabale oo cusub (oo aad labada dhinacba ka sawirtay).
Dhammaan faylashaada waa inaad kuso dirtaa Format-ka PDF. •
Lama aqbali doono codsigaada haddii dikumintigaadu dhammaystirneyn.
•Haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha kor ku xusan, islamarkaana aad si sax ah isku diwaan galiso; waxaa ku faran inaad la socoto shabakadda Website-ka shirkadda oo aad Email-kaaga kala socoto tallaabiyoonka iyo tilmaamooyinka xiga.
•Haddii magacaaga aad ka weydo liistada ama aan kuso diri weyno farriin Email ah waxay la macno tahay inaadan ku guuleysan inaad si sax ah isku diwaan galisay.
•Qofkii la ogaado inuu adeegsaday macluumaad been ah; waxay dhaxalsiin doontaa in laga kansalo dalabkiisa isla waqtiga lagu baraaruga xaqiiqadaas.
•Ku dir ciwaankan hoose
Haddaad u baahantahay in si faah-faahsan oo ay taxadar badani ku jirto in laguugu buuxiyo waxaad kala xidhiidhikartaa ciwaannada hoose.
Fadlan la xidhiidh wixii faah-faahin;●Green international education service ●Dhismaha KAAH dabaqa 4aad, qolka 106●TEL: +251915515151MAHADSANIDIIN.
Previous Post: Deg Deg:Madaxii ugu Sareeyay Ururka Daacish Oo Xaalad Caafimaad Hargaysa u jooga
Next Post: Daawo:-Nin Cadaan Ah oo somaliya Ka Duubay Filim Foolxun